Advertising & Promotion Assistant for Lynx Trading Co., Ltd. | Job in Myanmar
Jobs in Myanmar, jobs in Yangon - Sales & Marketing Jobs - Advertising & Promotion Assistant
•	ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ Advertising အပိုင်းနှင့် အတွေ့အကြုံ ရှိသူဖြစ်ရမည်။
•	အသက် (၂၂ မှ ၂၈ ) နှစ်ကြား၊ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁)နှစ်ကျော်ရှိရမည်။
•	Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Internet) ကျွမ်းကျင်ရမည်။
•	Promotion ပွဲများနှင့် အတွေ့အကြုံ ရှိသူဖြစ်ရမည်။
•	ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး အဖွဲ့အစည်းနှင့်လုပ်ကိုင်နိုင်သူ၊ နယ်ခရီးသွားနိုင်သူ၊
•	Female (2) Posts.
No. 18, Mya Street, Myanma Gonyaung Housing, Myittar Nyunt Ward, Tarmwe, Yangon.
Company Industry: Advertising & Promotion Assistant